ဒါ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာရဲ့ သတင်းရေးဟန်တဲ့လား၊ ဒီသတင်းကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ရှယ်ထားတယ်ဆိုတော့ ~ Myaylatt Daily.
ဒါ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာရဲ့ သတင်းရေးဟန်တဲ့လား၊ ဒီသတင်းကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ရှယ်ထားတယ်ဆိုတော့
Than Htike with AyeAye Aung and 19 others မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဒါ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာရဲ့ သတင်းရေးဟန်တဲ့လား၊ ဒီသတင်းကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်
ရှယ်ထားတယ်ဆိုတော့ ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်း သတင်းစာကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်နေပြီလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါပဲ....(ဟာဂျူလီ-ကသာ)
ဒီသတင်းသာ ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုနေရာမျိုး(သို့မဟုတ်) ပြင်ပစာစောင်တစ်ခုခုမှာ ပါလာရင်
ပြောစရာ မရှိလှပေမယ့် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာဖော်ပြပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ရှယ်ယူ လက်ခံထားတဲ့အတွက် အခုလို သတင်းဝေဖန်မှု ပြုလိုက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..၊
🔜 ကွမ်းယာဝယ်ယူသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ NLD ပါတီဝင် သုံးဦး တုတ်၊ ဓားများဖြင့် ရန်ပြုခံရ🔚.... တဲ့၊
' ကွမ်းယာဝယ်ယူသည့်ကိစ္စဖြင့် '..ဆိုခြင်းကြောင့် ဓားခုတ်ခံရမှုဟာ အလွန်သေးသိမ်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ဒီရေးသားနည်း မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်.....ကျွန်တော် တစ်ခု ထောက်ပြပါမယ်၊
(၁) ကြံ့ခိုင်ရေးက ဝန်ကြီးတစ်ယောက် ရပ်ကွက်ထဲ လမ်းလျှောက်ရင်း မဲဆွယ်လာတယ် ဆိုကြပါစို့...၊ အရက်ဝယ်ထွက်လာတဲ့ မူးကြောင်ကြောင်အရက်သမား တစ်ယောက်ယောက်က
ဝန်ကြီးကို ပုခုံးစောင်းတိုက်ပြီး ထိုးကြိတ်ကြမယ်ဆိုကြပါစို့....
🔜 အရက်ဝယ်ယူသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ကြံ့ခိုင်ရေးဝန်ကြီး ရန်ပြုခံရ🔚.လို့ သတင်းစာမှာ ခေါင်းစဉ်တပ်မှာပါလားခင်ဗျာ..၊
(၂) မာမီကွမ်းယာဆိုင်၌ ကွမ်းယာ ၀ယ်ယူစဉ် (၈)ရပ်ကွက် NLD အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ကျော်နှင့် စကားများခဲ့ ကြကြောင်း၊ ထို့နောက် ထိုးကြိတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ဇော်လတ်က နေအိမ်ရှိ အရှည်နှစ်ပေခွဲ ခန့်ရှိဓားယူ၍ ကွမ်းယာဆိုင်သို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ဦးအောင်ကျော်ကျော်ကို မတွေ့ရဘဲ (၉) လမ်းထိပ်ဘက်တွင် NLD ပါတီစည်းရုံးရေးကားနှင့် လူအုပ်ကြီးကို တွေ့သဖြင့် ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ ဇော်လတ်၏ ဘက်မှ ထက်အောင်လှိုင် (ခ) ထက်ကို နှင့် မျိုးမင်းခိုင်တို့ကလည်း တုတ်များဖြင့် အဆိုပါလူအုပ်အား ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။ ..လို့ ရေးသားသလို..
'ထို့နောက် ထိုးကြိတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ××××က နေအိမ်ရှိ အရှည်နှစ်ပေခွဲ ခန့်ရှိဓားယူ၍
ကွမ်းယာဆိုင်သို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးဝန်ကြီးကို မတွေ့ရဘဲ ×× လမ်းထိပ်ဘက်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီစည်းရုံးရေးကားနှင့် လူအုပ်ကြီးကို တွေ့သဖြင့် ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ ×××× ၏ ဘက်မှ ××××× နှင့် ×××တို့ကလည်း တုတ်များဖြင့် အဆိုပါလူအုပ်အား ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။' လို့ ရေးသားမှာပါလား ခင်ဗျာ..၊
(၃) ယခုဖြစ်စဉ်သည် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ ရန်ဖြစ်ပွားမှုသာဖြစ်ပြီး ပါတီစည်းရုံးရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေ မှုနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ....သတင်းစာမှာ ရေးသားသလို
ကြံ့ခိုင်ရေးဝန်ကြီး(ဒါမှမဟုတ်)ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီသာ ဖြစ်နေရင်ရော အဲဒီလိုပဲ..' ယခုဖြစ်စဉ်သည် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ ရန်ဖြစ်ပွားမှုသာဖြစ်ပြီး ပါတီစည်းရုံးရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေ မှုနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ '' လို့ ရေးမှာပါလားခင်ဗျာ..၊
(၄) နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာက..ဒီသတင်းဟာ လူထုအများအပြား ထောက်ခံနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်၊
🔜 ကွမ်းယာဝယ်ယူသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ NLD ပါတီဝင် သုံးဦး တုတ်၊ ဓားများဖြင့် ရန်ပြုခံရ🔚.. လို့  မဟုတ်မမှန် ရေးသားမှုဟာ လူထုအများအပြား ထောက်ခံနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အနည်းနဲ့အများ ထိပါးသွားစေခဲ့ပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ မဟုတ်မမှန်လို့ ကျွန်တော်သုံးနှုန်းလိုက်တာဟာ အရမ်းကာရော စွတ်စွဲချက် မဟုတ်ပါဘူး၊ဒီအမှုမှာ ပြန်ကြားရေးထက် ပိုပြီး နီးကပ်စွာ တိတိပပသိရှိတဲ့ Yangon Policeရဲ့ရေးသားချက်ဖြစ်တဲ့.
အရောက်တွင် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံတစ်ဦး ကွမ်းယာဆိုင်သို့ ရေ၀င်
သောက်စဉ် ဇော်လတ် ဆိုသူနှင့်စကားများပြီး ဇော်လတ်မှ လက်သီးဖြင့်ထိုးပြီး
ခုံဖြင့်ရိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဇော်လတ်မှ နေအိမ်သို့ ပြန်သွားကာ ငှက်ကြီးတောင်ဓါး
အားကိုင်ဆောင်၍လည်းကောင်း၊ ထက်ကို(ခ)ထက်အောင်လှိုင်နှင့် မျိုးမင်းခိုင်
တို့(၂)ဦးက တုတ်များကိုင်ဆောင်၍လည်းကောင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ရှိရာ
မာန်ပြေ(၉)လမ်းထိပ်သို့ လိုက်ပါလာပြီး ဆဲဆိုကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်
အဖွဲ့သားများအား ဓါးဖြင့်ခုတ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး
လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်(၁)မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ဖြစ်သူ ဦးနိုင်ငံလင်း၊ ရပ်/ကျေးအလုပ်အမှုဆောင် ဦးကျော်သူနှင့် တိုင်းဒေသ
ကြီးလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၂)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း၏
ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဒေါ်သန္တာမော်တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြကြောင်း၊
ယင်းသို့ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူပေးရန် သာကေတမြို့နယ်၊ အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိုချိုမှ
တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် သာကေတမြို့မရဲစခန်း(ပ)၆၀၉/၂၀၁၅၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၂၆/
၃၂၃/၂၉၄/ ၁၁၄ ဖြင့် ....🔚 ဆိုပြီးရေဝင်သောက်ရာမှ ရန်စဖြစ်တယ် လို့ ရေးသားထားလို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီ လွဲမှားမှုအပေါ် တာဝန်အရှိဆုံး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုတာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှာလဲဆိုတာ သိချင်လှပါတယ်ခင်ဗျာ..၊
ရိုသေမှုဖြင့် ...( ဟာဂျူလီ-ကသာ)
----------ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ရှယ်ယူထားသော သတင်းစာပါ သတင်း------
သာကေတမြို့နယ်၌ ကွမ်းယာဝယ်ယူသည့်ကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ NLD ပါတီဝင် သုံးဦး တုတ်၊ ဓားများဖြင့် ရန်ပြုခံရ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ အား ချက်ချင်း ဖမ်းဆီးအရေးယူ ထား၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများမှာ မည်သည့်ပါတီဝင်မျှ မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ် မာန်ပြေ (၈) လမ်းထိပ်ရှိ ကွမ်းယာဆိုင်၌ ကွမ်းယာဝယ်ယူရာမှာ စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားဒိမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ အဖွဲ့ဝင် သုံးဦး တုတ်၊ ဓားများဖြင့် ရန်ပြုခံရသဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ချက်ချင်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သာကေတမြို့နယ် မာန်ပြေ (၃)ရပ်ကွက် မာန်ပြေ(၈)လမ်း ထိပ်တွင် နေထိုင် သည့် ဇော်လတ်သည် အဆိုပါလမ်းထိပ်ရှိ မာမီကွမ်းယာဆိုင်၌ ကွမ်းယာ ၀ယ်ယူစဉ် (၈)ရပ်ကွက် NLD အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ကျော်နှင့် စကားများခဲ့ ကြကြောင်း၊ ထို့နောက် ထိုးကြိတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ဇော်လတ်က နေအိမ်ရှိ အရှည်နှစ်ပေခွဲ ခန့်ရှိဓားယူ၍ ကွမ်းယာဆိုင်သို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး ဦးအောင်ကျော်ကျော်ကို မတွေ့ရဘဲ (၉) လမ်းထိပ်ဘက်တွင် NLD ပါတီစည်းရုံးရေးကားနှင့် လူအုပ်ကြီးကို တွေ့သဖြင့် ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း၊ ဇော်လတ်၏ ဘက်မှ ထက်အောင်လှိုင် (ခ) ထက်ကို နှင့် မျိုးမင်းခိုင်တို့ကလည်း တုတ်များဖြင့် အဆိုပါလူအုပ်အား ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဓား၊ တုတ်များဖြင့် ရန်ပြုခဲ့မှုကြောင့် NLD ပါတီဝင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်-၁ မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်း၊ မာန်ပြေ (၃) ရပ်ကွက် NLD ပါတီ အလုပ်အမှုဆောင် ဦးကျော်သူနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် - ၂ မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဒေါ် သက်ထားနွယ်ဝင်း၏ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သန္တာမော်တို့သုံးဦးမှာ ဒဏ်ရာများရခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သုံးဦးအား သာကေတမြို့နယ် အမှတ် (၁) မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ချက်ချင်းဖမ်းဆီးပြီး အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဇော်လတ်မှာ မည်သည့် ပါတီဝင်မျှ မဟုတ်ဘဲ သာမန် အရပ်သားတစ်ဦးသာဖြစ်ကာ အရက်သေစာသောက်စား ထားသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယခုဖြစ်စဉ်သည် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ ရန်ဖြစ်ပွားမှုသာဖြစ်ပြီး ပါတီစည်းရုံးရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေ မှုနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဖျော်ဖြေရေးယာဉ်များ အချင်းချင်းနှင့် ပါတီစည်းရုံးရေး အဖွဲ့များ တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲတွေ့ဆုံပါက ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်ပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး လေးစားစွာ ဆက်ဆံကြကာ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများ ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ ထိန်းထိန်းသိမ်း သိမ်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ၏ ပုံရ်ိပ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့မြင် သိရှိနေရသည်။
အလားတူ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်လည်း ပြစ်မှုဖြစ်ပွား ပါက မည်သည့် ဘက်ကိုမျှ ဘက်လိုက်ခြင်းမပြုဘဲ မျှမျှတတ အရေးယူဆောင် ရွက်ခြင်း ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလတည်ငြိမ် အေး ချမ်းရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရ သည်။
-----------------yangon police ၏ရေးသားချက်---------
ရန်ဖြစ်ပြီး ပါတီဝင်များအား ဓားဖြင့်ခုတ်၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ
၂၉.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၂၁၃၀ အချိန်ခန့်တွင် သာကေတမြို့နယ် အမျိုးသား
ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့သည်
သာကေတမြို့နယ်၊ ၃/မာန်ပြေရပ်ကွက်၊ မာန်ပြေလမ်းနှင့် မာန်ပြေ(၈)လမ်းထိပ်
၃၂၃/၂၉၄/ ၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် ဦးနိုင်ငံလင်းတွင် နဖူးဝဲဘက်နှင့် ၀ဲ/ယာ
လက်နှစ်ဖက်တို့တွင် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ များနှင့် ဦးကျော်သူတွင် ယာလက်ဖ၀ါး၌
ပြတ်ရှဒဏ်ရာတို့ရရှိခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့(၂)ဦးမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ အတွင်းလူနာ(မစိုးရိမ်ရ)များအဖြစ် ကုသလျက်ရှိပြီး ဒေါ်သန္တာမော်တွင် ၀ဲလက်မောင်း၌
နာကျင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သဖြင့် ပြင်ပလူနာအဖြစ် ကုသခဲ့ရပါသည်။
အမှုမှပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သာကေတမြို့နယ်နေသူများဖြစ်သည့် ဇော်လတ်၊
(၄၀)နှစ်၊ ထက်ကို(ခ)ထက်အောင်လှိုင်၊ (၂၄)နှစ်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်နေ
မျိုးမင်းခိုင်၊ (၂၆)နှစ်တို့(၃)ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး အမှုဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များသည် မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ပါတီစည်းရုံးရေးဆောင်ရွက်ရာမှ
ပြန်လာစဉ် မာန်ပြေလမ်းနှင့် မာန်ပြေ(၈)လမ်းထိပ်အရောက် မဲဆွယ်စည်းရုံး
ရာတွင်ပါရှိသည့် ကိုလှဝင်းနှင့် ကိုမြင့်စိုးတို့မှ ကွမ်းယာဝင်ဝယ်စဉ် ဇော်လတ်
ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းအား ဦးစွာကွမ်းယာထုပ်ပေးရန်ပြောဆိုရာမှ ၎င်းတို့ စကား
များကြကာ စတင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုအောင်ကျော်ကျော်မှ
သွားရောက်ဖြန်ဖြေတားဆီးစဉ် ကိုအောင်ကျော်ကျော်ကိုလည်း လက်သီးဖြင့်
ထိုး၍ ခုံဖြင့်ရိုက်ရန်ရွယ်ကာ ဇော်လတ်မှာ ထွက်ခွာသွားကြောင်း၊ ခဏအကြာ
တွင် ဇော်လတ်မှာ ငှက်ကြီးတောင် ဓါးအား ကိုင်ဆောင်၍ ၎င်းနှင့်အတူ
ထက်ကို(ခ)ထက်အောင်လှိုင်နှင့် မျိုးမင်းခိုင်တို့မှ တုတ်များကိုင်ဆောင်ကာ
အခင်းဖြစ်နေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီး ဆဲဆိုရန်မူခဲ့ကြသဖြင့် ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေ
ပေးကြသော ဦးနိုင်ငံလင်း၊ ဦးကျော်သူနှင့် ဒေါ်သန္တာမော်တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိ
ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဇော်လတ်၏ဖခင်မှာလည်း ယခုလက်ရှိ
သာကေတမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရပ်ကွက်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်